Izindaba - Ukuzilibazisa okudala kwezindwangu zokwakha izingubo
Ukwakhiwa kabusha kwezindwangu kungashiwo ukuthi kungumklamo wesibili wendwangu yezingubo. Kusho ukucubungula kwesibili kwezindwangu eziqediwe ngokusho komklamo udinga ukukhiqiza imiphumela emisha yobuciko. Kukwandiswa komcabango womklami futhi kunemisebenzi emisha engenakuqhathaniswa. Kwenza umsebenzi womklami uhluke ngokwengeziwe.
Izindlela zokwakha kabusha indwangu yezingubo
Izindlela ezisetshenziswa kakhulu yilezi: ukwelukwa, ukunqwabelaniswa, ukuncengwa, ukugqobhoza kanye nokuvezwa okuvezwa ngomlomo, ukuphuma okuyize, ukuphrinta imifekethiso, njll., Iningi lazo lisetshenziswa ekwakhiweni kwezingubo kwasendaweni ukukhombisa lezi zindlela, kodwa futhi nendwangu yonke.
Ukwaluka ngobuciko, ngokuthungwa okuhlukile kwentambo, intambo, intambo, iribhoni, intambo yokuhlobisa, ukukhilosha noma izindlela zokuluka, kuhlanganiswe kwemisebenzi ehlukahlukene yokudala, kwakha i-convex ne-concave, i-crisscross, imiphumela eqhubekayo, ehlukile
Ukustaka, ukugqagqana kwemibala eyahlukahlukene nokwakheka.
Okwaziwa nangokuthi ukuncenga, ukuncenga kunganciphisa noma kunciphise ingxenye ende futhi ebanzi yendwangu yengubo, yenze ingubo ibe ntofontofo futhi ibe yinhle. Okwamanje, futhi inganikeza ukudlala kuzici ezihlelekile nezicwangcisiwe zendwangu, ezingagcini nje ngokwenza ingubo ikhululeke futhi ilingane, kepha futhi yandisa nomphumela wokuhlobisa.
Ngoba inemiphumela yomibili esebenzayo neyokuhlobisa, isetshenziswe kabanzi ezingutsheni zabesifazane abazikhululekile nabakhululekile, okwenza ingubo ibe nenjongo futhi ibe nomdlandla.
Hollowing, kuhlanganise hollowing, eqoshwe imbobo, hollowing ipuleti umugqa, eqoshwe icala, njll
Ekuklanyeni kwemfashini, isitayela, indwangu nobuchwepheshe yizinto ezibalulekile, futhi ukwakhiwa kwendwangu yesibili kudlala indima ebaluleke kakhulu. Ucezu lwendwangu enhle emzimbeni, ukuma okungahleliwe kuyimfashini enhle. Indwangu ngemuva kokuklanywa kwesibili ihambisana kakhulu nomqondo womklami, ngoba isivele isiqedile uhhafu womsebenzi wokuklama imvunulo, futhi izoletha ugqozi olwengeziwe nentshisekelo yokudala kumklami.